Zọpụta ego na -echegbu! Kedu otu esi ahazi akpa ịchọ mma Capsule kacha mma?
Gịnị bụ "akpa ịchọ mma capsule"? O yiri “akwa mkpuchi” nke onye ọ bụla na -akpọkarị. Agbanyeghị na enweghị ọtụtụ ihe na akpa ịchọ mma a, ọ nwere "ihe ndị bụ isi" dị mkpa maka etemeete kwa ụbọchị. Na ngwaahịa ...
Etu esi eme mma n'oge ọkọchị nke na -adịghị agbaze ma ọ naghị apụ!
Kemgbe mmalite oge ọkọchị, nnukwu isi ọwụwa maka ihe ngosi dị ka m nke na -akwụsịghị ịchụso ịma mma na -ewepụ etemeete ha n'oge ọkọchị, ọkachasị mgbe etemeete dị ọkụ na etemeete gbazere. Mgbe ọkara otu elekere nke etemeete siri ike, ọ na -atụgharị bụrụ nnukwu ihe esere ese ...
Lipsticks 3 dabara nke ọma maka oge ọkọchị, ịma mma na -ebe akwa!
Ọ dị iche na mmetụta '' dị arọ '' nke mgbụsị akwụkwọ na udu mmiri, oge ọkọchị na -adịkarị 'ume ọhụrụ' ka ọ pụọ, etemeete bụkwa ihe na -ewu ewu na nghọta. Mana n'agbanyeghị etu etemeete si apụta ìhè, itinye lipstick ka bụ ihe dị mkpa maka ọtụtụ mmadụ. ...
Mee ụdị nhazi etemeete 4, naanị otu anya onyinyo zuru ezu!
site na nchịkwa na 21-05-31
Ekwenyere m na ọtụtụ ndị mara mma nwere ụdị nsogbu a. Ọtụtụ onyinyo anya nwere ọtụtụ agba dị ịtụnanya na nlele mbụ. Mgbe ha nyere iwu n'echeghị echiche, ha achọpụta na ha enweghị ụzọ ha ga -esi malite. N'ikpeazụ, ọdịnihu ha nwere ike belata ka ọ na -atụba ntụ miri emi na drawer ....
Otu esi etinye etemeete, mee ka ọ dị mfe na usoro 5
site na nchịkwa na 20-12-26
Nzọụkwụ 1: Moisturizer Itinye etemeete bụ nka. Akpụkpọ ahụ dị larịị, nke dị nro bụ ihe kacha mma gị. Iji mee nke a, ịchọrọ moisturizer. Sichaa ihu gị wee tinye aka n'ụba, na -enye akpụkpọ gị nkeji ole na ole ka ọ gbapụta ude mmiri ma ọ bụ ịgba. Nzọụkwụ 2: Primer Primer na -enyere aka ịkwadebe akpụkpọ gị maka concea ...
Ọtụtụ ndị mmadụ na -enwe mgbagwoju anya gbasara otu ha ga -esi mara ụdị anya anya ha na otu esi ahọrọ nku anya ụgha kwesịrị ekwesị. N'okpuru bụ mmeghe nkọwa na ntụnye maka amaokwu gị. Kalocils Mma na -enye gị lashes ụgha kacha mma mgbe niile. ...
Otu esi ahazi akara ngosi nkeonwe gị, usoro nhazi ọkachamara na -azọpụta oge na mbọ gị.
Otu esi ahazi akara ngosi nkeonwe gị, usoro nhazi ọkachamara na -azọpụta oge na mbọ gị. 1, Ziga faịlụ akara maka ịhazi akara ngosi, biko ziga faịlụ isi akara na AI ma ọ bụ n'ụdị PDF. Faịlụ akara doro anya nwere ike inyere anyị aka igosipụta mbipụta nke akara ngosi mgbe ị na -ebi akwụkwọ. Ihe i ...
Otu esi etinye nku anya ụgha, ụzọ kachasị mfe iji mee ka anya gị na -enwu gbaa
Otu esi etinye nku anya ụgha, ụzọ kachasị mfe iji mee ka anya gị na -enwu ma na -adọrọ adọrọ 1, Jikere iyi nku anya ụgha. Jidesie eriri ahịrị n'anya gị maka ịlele ogologo ziri ezi ka ọ ghara ịdị ogologo, nke ga -abụ ahụ erughị ala ...
Ọnụ ọgụgụ uto nke ire ahịa ihe ịchọ mma n'ọnwa Ọktoba ji okpukpu atọ tụnyere oge ahụ n'afọ gara aga, ngụkọta ijeri 28.1, mmụba nke 18.3% afọ-afọ
Na Nọvemba 16, National Bureau of Statistics wepụtara data na-egosi na n'ọnwa Ọktọba, ngụkọta ahịa ahịa nke ngwongwo ndị ahịa na mba m bụ ijeri yuan 3,857.6, mmụba nke otu afọ na 4.3%, na ọnụego uto bụ pasent 1.0. dị elu karịa ọnwa gara aga. N'ime ha, t ...
Ogo ngwaahịa ngwaahịa etemeete ka mma na -abịa site nyocha na mmepe na nleba anya na njikwa nke ọma. Nanchang Weiti Technology Co., Ltd. bụ ụlọ ọrụ ịchọ mma dị iche iche na -ejikọta mmepe ngwaahịa, mmepụta na ahịa n'ịntanetị. Na -agbaso ụkpụrụ ụlọ ọrụ nke "Q ...
Ntutu nku ugha na ntutu anụmanụ na ntutu isi, nke kaara gị mma?
1, Ntutu Anụmanụ A na -eme ajị anụ ka nku anya ụgha sitere na ntutu amịpụtara na anụmanụ. E jiri ya tụnyere nku anya eriri, ọ na -agbacha agbacha, mana maka na ọ bụ ntutu a na -amịpụtara site na anụmanụ, o yiri ntutu nke ahụ mmadụ, yana obere mmanụ. Nwee mmetụta na -enwu enwu. Ntutu anụmanụ dị iche iche ...
Mgbatị ntutu anya, Anya anya, eyeliner, mink lashes, egbugbere ọnụ, Ndị na -ere ntutu anya,